Top 13 món kho ngon nhất từ thịt heo | Excitinghochiminhcity - Excitinghochiminhcity.Vn
Top 13 món kho ngon nhất từ thịt heo | Excitinghochiminhcity
Nguruve, inozivikanwawo senguruve, chikafu chemombe chenyama chinowanzoonekwa mukudya kwemhuri kwevanhu veVietnamese. Nguruve inogona kugadzirwa akawanda akasiyana madhishi, zvisinei, chinyorwa ichi Tikibook chinokuzivisa iwe kune yakanakisa braised yenguruve ndiro!
Taro yakapfuma mukunaka, inodyiwa nemafuta enguruve, yakasanganiswa nekunaka kwechili uye mhiripiri, zvichiita kuti ndiro yacho inakidze.
Condiments: munyu, shuga, oyster sauce, main noodles,…
Danho 1: Fashaidza kana fry nyama kwemaminitsi mashanu. Woicheka kuita zvidimbu zvinoruma.
Danho rechipiri: Peel mbatatisi, geza uye ucheke mbatatisi yega yega kuita zvidimbu zvina.
Danho rechitatu: Isai nyama mundiro ine oyster muto, shuga, munyu mudiki, hanyanisi dzvuku uye nyeredzi anise.
Danho rechina: Isa nyama mupoto, fambisa zvakanaka netaro uye wedzera mvura kuvhara kumeso. Bika pamusoro pekupisa kusvika pakuvira, uye kuderedza kupisa. Kana nyama uye mbatatisi zvinyoro, bvisa moto uye uise nyama mundiro uye unakidzwe!
Taro akabika nyama
Shrimp nyama yakakangwa Iyo ndiro yakapfuma zvakanyanya kana iine nyama inovaka muviri uye yakapfuma shrimp inonaka kubva kugungwa.
Huwandu hwema shrimp hutsva hwakakwana kudya hwakagezwa, miswe uye ndebvu dzakabviswa
Huwandu hwedumbu renguruve hwakagezwa uye hwakachekwa kuti hukwane muromo
Pre-minced onion uye garlic
Chidiki cheHue hove muto
Zvinonhuwira: mhiripiri, munyu, shuga, chili, mainodles, hove muto, mafuta ekubikisa, …
Danho rekutanga: Chengetedza nyama nezvinonhuhwira zviripo zvakaita semuto wehove, mhiripiri, ma noodles makuru, mupfudze, Hue shrimp paste, shuga, minced chili poda kana chili uye mafuta ekubikisa mukati memaminitsi makumi matatu.
Nhanho yechipiri: Wedzera shrimp kuti ufambe nemunyu mushoma uye mainodles.
Danho rechitatu: Fry the minced onion uye garlic kusvika kunhuhwirira uye wobva wawedzera nyama kuchitsuwa kuti usimbise. Kana nyama yave ichivhimwa, wedzera shrimp kuchitsuwa nenyama. Paunoona kuti shrimp yakatsvuka, unogona kuwedzera marinade uye kuwedzera mvura yakasvibiswa. Sveta nyama uye shrimp kwemaminitsi angangoita gumi, uye edza uye dzokorora mwaka pamwe nekuderedza kupisa.
Danho rechina: Chengetedza kusvika mvura iri mupoto inenge isina chinhu, wedzera paprika shoma uye mhiripiri, fambisa zvakanaka uye dzima chitofu. Saka, mhuri yangu ine dhishi rinopisa renyama yakakangwa shrimp patireyi yemupunga!
Shrimp nyama yakakangwa
Braised pork nehove muto Hue-style lemongrass inodiwa nemhuri dzakawanda nekuda kwekunaka, kupfuma kunhuhwirira kwe shrimp paste yakasanganiswa nemafuta enguruve dumbu, pamwe nekunhuhwirira kwakasimba kwelemongrass uye kadiki diki twunorunga. Nechikafu ichi, mhuri yako yose ichava nezvokudya zvinonaka, ndiro imwe neimwe yemupunga inoderera zvishoma nezvishoma uye dumbu rako richazara chero nguva.
3-5 ounces bhekoni kana bhekoni
Hue hove muto
Garlic yakagurwa uye lemongrass
Zvinonhuwira: minced chili, shuga, mhiripiri, monosodium glutamate, muto wehove, …
Danho 1: Bacon kana bhekoni zvinogezwa uye kuchekwa.
Chechipiri: Sanganisa muto wehove nemaspuni maviri eshuga nemvura shoma
Danho rechitatu: Fry the minced garlic, lemongrass, uye chilipipiritsi, wobva wawedzera nyama uye fambisa zvakanaka.
Danho rechina: Kana nyama ikaita yero zvishoma, wedzera muto kuchitsuwa zvakaenzana. Wobva wawedzera seasoning kuravira. Bvisa kupisa uye uise mundiro. Saka, kune chikafu chinonaka chenyama yakarukwa neHue hove muto, inonaka nekunhuhwirira kwelemongrass nehanyanisi!
Yakarukwa nyama ine Hue hove muto
Braised nyama yenguruve dumbu ine jackfruit fiberChikafu chine kunhuhwirira kwakasimba kwekumusha, musanganiswa wenyama isina kuonda, mafuta, uye mafuta ane kakutapira uye magadzirirwo eshinda yejackfruit inoita kuravira kwakajairwa kumaruwa asi chinhu chitsva kuvanhu veko vanogara muguta.
READ 2 cách làm bánh khoai tây chiên giòn rụm ngon hết sảy | Excitinghochiminhcity
300g yenguruve dumbu: yakashambidzwa uye kucheka kuita zvidimbu zvidiki
200 gr yejaya jackfruit fiber: bvisa ganda uye kubvarura fibers
Condiments: hove muto, chili, cashew ruvara, ine mavara mvura, shuga, mwaka.
Danho 1: Marinate nyama nezvinonhuwira zvakagadzirirwa kwemaminitsi makumi matatu.
Danho rechipiri: Sauté onion nemafuta ecashew uye simbisa fry kusvika nyama yaibva, wobva wawedzera jackfruit kuchitsuwa. Wedzera muto wehove shoma panguva yekukurudzira kuunza kunhuhwirira kwenyama yakakangwa.
Danho rechitatu: Wedzera mvura uye uuye kumota. Zvadaro gadzira nezvinonhuwira uye udzikise kupisa. Simmer kusvikira nyama inonhuhwirira uye yakakora, wozodzima moto.
Yakarukwa nyama ine jackfruit fiber
Beef shard Inofarirwa zvikuru pakudya kwemhuri nekuti izere nezvinovaka muviri kubva mumuriwo nenyama.
Bacon: yakashambidzwa uye yakachekwa zvishoma gobvu zvakakwana kuti udye
2-3 machena radishes, akasvuura uye akachekwa kuita machunks akaruma
Onion yepepuru yakagurwa
Condiments: muto wehove, mhiripiri, shuga, mainodhi, mvura ine mavara uye mafuta ekubikisa.
Danho 1: Chengetedza nyama ne 2 maspuni ehove muto, 1 teaspoon yeshuga, 1 teaspoon ye minced shallot, munyu mudiki, noodles, mvura ine ruvara uye kubika mafuta kwemaawa 1-2 tisati tabika.
Chechipiri: Isa mafuta mashoma uye fryer hanyanisi mupoto kusvika anhuhwirira. Zvadaro, isa nyama pachitsuwa kusvikira nyama ichivhimwa, wobva wawedzera radishes kuchitsuwa. Zvadaro wobva wawedzera marinade zvishoma uye mvura shoma yakanatswa muhari uye ubike pamoto muduku.
Chechitatu: Kana nyama iri mupoto yave kubuda mumvura, wedzera muto wehove woravira zvakare. Saka pane chikafu chebraised radish chakapfava, chinotapira uye chinonaka kudya nemupunga jena.
Yakabikwa nyama Iyo inozivikanwawo se nyama yakarukwa ine mhodzi yedhadha chikafu chinovaka muviri chinowanzo kuwanikwa mukudya kwemhuri yeVietnamese, kunyanya kukosha mumatireyi emupunga eSouthern New Year.
Gumbo renguruve kana dumbu renguruve zvinoenderana nekuti ingani mhuri dzinogona kudya
Mazai akawanda ezvihuta
Red onion, garlic, mupunga waini
Kurungwa: munyu, muto wehove, mhiripiri, mafuta ekubikisa, mvura ine ruvara,…
Danho 1: Geza nyama nemvura yakabikwa yakabikwa kana mupunga. Cheka chidimbu chimwe nechimwe kuti uravire. Zvadaro, gadzira nyama yacho nezvinonhuhwira zvakaita semuto wehove, hanyanisi, mhiripiri, gariki, munyu mudiki, mvura ine ruvara nemafuta ekubikisa, wozoisa mufiriji kwemaawa maviri.
Danho rechipiri: Fashaidza mazai ezvihuta wobvisa mateko mundiro yakasiyana.
Danho rechitatu: Kanda hanyanisi yepepuru kuti isanamatira mupoto kana uchibika. Wobva wawedzera nyama yakakangwa uye simbisa-fry, wobva wawedzera mvura yekokonati muhari. Uyai nekupisa kumota pakutanga, uye zvishoma nezvishoma kuderedza kokonati mvura kuti iite zvishoma nezvishoma uye inyura munyama.
Danho rechina: Kana mvura yaoma, kuravira uye wedzera musanganiswa kuravira, wobva wadonhedza mazai ezvihuta mustock kusvika nyama yanyorova uye wodzima kupisa. Saka mhuri yangu yakadya nyama yenguruve yakakangwa nemvura yekokonati.
Kazhinji, tinongobika nyama yenguva dzose yakagochwa kuti tidye nemhuri, saka wadii kuita kuti ndiro yacho ive yakakosha kana uchiwedzera kokonati. Yakavimbiswa coconut braised nyama ichaunza flavour nyowani iyo mhuri yese ichada.
4-5 ounces yebhakoni itsva
120ml yakachena kokonati mvura
1 mbiya yepre-sliced ​​​​copra inenge 2cm kureba uye gobvu.
Condiments: shuga, monosodium glutamate, hove muto,…
READ Top 16 Quán súp cua ngon đáng thử nhất ở Sài Gòn TPHCM | Excitinghochiminhcity
Danho 1: Isa 1 teaspoon yeshuga mupani uye uuye nayo kumota nemvura shoma. Kana shuga yachinja ruvara, unowedzera kapu imwe yemvura kuti uchengetedze semvura yemuvara.
Danho rechipiri: Cheka nyama kuita zvidimbu zvakakora uye fambisa nehove sosi, monosodium glutamate, uye shuga kweinenge awa.
Danho rechitatu: Kana nyama yave nenguva yakakwana yekupinza zvinonhuwira, isa nyama mupani yakakangwa nemafuta mashoma, wobva wawedzera kokonati mvura, marinade nemvura ine mavara uye ubike pamoto mukuru.
Danho rechina: Chengeta kwemaminetsi angangoita gumi nemashanu kusvika nyama yapfava zvakakwana, ramba uchiwedzera mupunga wekokonati kustock kusvika stock iri mupoto yave kupera. Dzima chitofu uye ubudise mundiro. Saka mhuri yako ine inonaka inotapira yekokonati yakarukwa nyama ndiro!
Coconut yakabikwa nyama
Mhuno inonhuhwirira, uchiwedzera kuravira kwenyama yenguruve yakarukwa neginger zvechokwadi zvinokuita kuti udziye zvakanyanya mumazuva ekutonhora netireyi yemhuri yemupunga.
500g yenguruve dumbu rinonaka
1 chidimbu cheginger, anyezi akaomeswa, chili
Shuga, muto wehupfu, hove muto, mhiripiri
Danho 1: Masisita matatu anongosarudza chikamu chisiri kureba, mafuta nenhengo dzakaonda zvakaenzana, vhara munyu uchitenderedza chitunha, chenesa nemvura inopisa, wozocheka chidimbu chimwe nechimwe chingangoita 3cm. Cheka nyama neshuga shoma nemuto wehove kwemaminetsi makumi matatu kuti nyama itore zvinonhuwira.
Danho rechipiri: Sinzvadzi dzeginger dzakasvuura ganda, dzakagezwa nemvura uye dzakachekwa zvitete. Fry mafuta nepepuru hanyanisi, ginger, fry-fry the meat with some colored chili peppers, fambisa kuti utore seasoning, vhara chivharo kuti muto ubude, bika kusvika waoma, mafuta anosanganiswa neshuga kuita mapapiro ebrown. zvakanaka.
Yakabikwa nyama yenguruve ne ginger
Nyama ne pepper kushumirwa nemupunga unopisa ndiyo sarudzo yakakodzera yezuva rakabatikana remhuri yako.
3-4 ounces bhekoni kana chiuno
Zvinonhuwira: hove sosi, oyster muto, shuga, mhiripiri, …
Danho 1: Shamba nyama yenguruve nemvura yemupunga kana mvura yemunyu. Zvadaro blanch iyo mumvura inopisa uye uibudise kunze kuti ibude.
Danho rechipiri: Isa 1 teaspoon yeshuga muhari kusvika yanyunguduka kusvika yasvika paruvara rwe caramel, wedzera nyama uye fambisa zvakanaka negariki yakapwanyika.
Danho rechitatu: Kana nyama yapfava uye yaita goridhe, wedzera muto weoyster, muto wehove, mhiripiri uye shuga shoma wosanganisa zvakanaka zvakare usati wawedzera mvura kustock. Chengetedza moto wakaderera kusvikira muto wava nyama yemuakasia, uye mhuri yako inogona kushandisa iyi inonaka uye inoyevedza yakarukwa yenguruve dumbu!
Nyama ne pepper
Pineapple yakakangwa nyama Zvinonaka pakudya kwemhuri!
500g bhekoni kana rump nyama, yakashambidzwa uye kuchekwa kuita zvidimbu zvakakura
Hafu yepineapple isina kuibva, yakashambidzwa uye icheke muzvidimbu zvepakati
Condiments: mvura ine mavara, munyu, mhiripiri, muto wehove, mainnoodles nemafuta ekubikisa.
Danho 1: Chengetedza nyama ne minced shallot, 3 maspuni muto wehove, munyu mudiki, mhiripiri, mvura ine ruvara, noodles nemafuta ekubikisa.
Chechipiri: Fryi hanyanisi yepepuru mupoto, wobva wawedzera nyama yakakangwa kuchitsuwa kuti nyama yacho ivhime zvakare. Zvadaro wobva wawedzera zvose marinade, uwedzere mvura kusvika pamwero wenyama uye ubike pamoto mukuru.
Danho rechitatu: Kana mvura iri mupoto yavira, dzikisa kupisa, wedzera chinanasi uye ramba uchichengeta kusvika stock yakora. Iwe unogona kuwedzera chilli chiduku kune zvinonhuwira. Wodzima chitofu woburitsa mundiro. Saka mhuri yangu ine pineapple braised meat dish inonaka!
Pineapple yakakangwa nyama
Nzira yekuita sei green banana braised nyama Icho chitsva kwazvo muVietnamese cuisine, nekuti kazhinji isu tinowanzo bika hove nemabhanana, matatya anobika nemabhanana akasvibira, asi kashoma kubika ndiro nemusanganiswa wenyama uye girinhi mabhanana, handiti?
500g yenguruve dumbu: yakashambidzwa, kucheka kureba uye zvishoma gobvu
5 mabhanana egreen mhiripiri: svuura mitsetse mishoma kuti ubvise plastiki, cheka kuita zvimedu uye wonyika mundiro yemvura yakasanganiswa nekamuti keremoni.
Mashoma mapeiri mashizha uye scallions: akachekwa zvakanaka
Zvinonhuwira: Turmeric, shrimp paste, galangal muto, batch, mhiripiri, shuga …
Danho 1: Chengetedza nyama ne 1/2 chipunu chegalangal juice, 1/2 teaspoon yeturmeric, ½ teaspoon yebatch, 1 kikapu ye shrimp paste, 1 kikapu yeshuga, mhodzi dzokurunga uye mafuta ekubikisa.
Danho rechipiri: Fashaidza mabhanana nemvura inopisa yakasanganiswa nemabhachi mashoma zvisati zvaitika. Kana banana raibva, ribudise.
Danho rechitatu: Fry the onion, wedzera 1 spoon ye shrimp paste uye udururire nyama yakakanyiwa muchitsuwa. Ramba uchiwedzera mabanana uye kuwedzera mvura. Bika nekupisa kukuru pakutanga uye kuderedza kupisa kusvika pasi kana uchifashaira. Mushure memaminitsi makumi matatu, mabhanana aibva uye nyama yakanyorova, bvisa moto.
Green banana braised nyama
Braised nyama ine bamboo shoots ndiro yakakurumbira zvikuru. Nyama yakapfava uye inonhuhwirira, uye kuravira kwakapfava kwemashizha emushenjere kunoita kuti chikafu chiwedzere kunakidza kupfuura kare.
Miti itsva ye bamboo yakashambidzwa uye yakatemwa kuita zvidimbu zvikuru.
Zvinonhuwira: hanyanisi, gariki, mhiripiri, mvura ine ruvara, shuga, chili,…
Danho 1: Birisa bamboo kupfura kakawanda kuderedza kuvava, kuvava uye kunhuwirira. Zvadaro rega nhungirwa dze bamboo dzakabikwa dzideredze
Danho rechipiri: Cheka bhekoni kuita zvidimbu zvakakura.
Danho rechitatu: Kangadza nyama yakatsva woisa zvinonhuwira zvose pamwe chete nemvura shoma kuti uvhare nyama.
Danho rechina: Bika nyama kwemaminetsi angangoita mashanu kusvika yapfava zvakakwana, wobva wawedzera nhungirwa dzeshenjere woramba uchibika kwemamwe maminetsi gumi nemashanu, yakapfava zvakakwana kune zvese nhungirwa dzeshenjere nenyama.
Nhanho yechishanu: Uchiona kuti stock yatooma, dzima chitofu uye unakirwe nenyama inonaka yakakangwa iyi nemhuri yese!
Braised nyama ine bamboo shoots
Nguruve chinhu chakanyanya kufarirwa uye chakakurumbira chikafu chekudya chese imba. Nekuti kune akawanda madhishi akagadzirwa nenguruve uye kubva kune ekubika masitayipi kusvika kune emukati masanganiswa akasiyana zvakare. Imwe yedzakajairika nzira dzekubika uye dzinowanzoshandiswa nemadzimai epamba muNorth ndeye kubika nyama yenguruve yakabikwa ne soy muto.
3-5 ounces yebhekoni inonaka– Hafu yendiro ye soy muto
Onion yakagurwa, garlic
Zvinonhuwira: chili, shuga, mhiripiri, monosodium glutamate, …
Danho 1: Geza nyama nemvura yemupunga woicheka kuita zvidimbu zvinoruma, kwete kuita zvitete. Zvadaro marinated nehanyanisi, pepper, cork sauce, shuga uye chili.
Danho rechipiri: Pisa poto kutanga, wobva waisa nyama uye marinade muchitokisi nekupisa kwakaderera. Kana mvura yava kuoma, dzima chitofu. Braised nyama yenguruve ine soy muto iri nyore kugadzira uye inopihwa nekupisa, kutapira uye kunakidza mupunga. Ngatiedzei!
Yakabikwa nyama ne soy muto
← Chinh phục đỉnh Pinhatt – Thử thách cho phượt thủ tại Đà Lạt | Excitinghochiminhcity
Top 5 vườn hoa hướng dương Đà Lạt rực rỡ được khen ngợi hết lời | Excitinghochiminhcity →